Ngaba kunjalo nakwiiPixel Buds Earphones, ukhuphiswano kwii-AirPods? | IPhone iindaba
Uphando ukhethe ukuthatha indlela elula kwitekhnoloji, yi Ukunikezela ukwazisa uthotho lwezixhobo esele bazibonisile kwakudala ezinye iinkampani, Okona kubi kuko konke, kubandakanya nenqanaba lokucela phakathi komncinci kunye nokungabikho, oko kukuthi into esiyifumana ngePixel Buds.
Xa sibona uGoogle wePixel Buds Into yokuqala esinokuyicinga kukuba ngenxa yezizathu ezicacileyo ziintshaba zee-AirPods kodwa ... ngaba yinyani le? Nada ngaphezulu kude inyani, uGoogle ulinganiselwe ukubonisa ii-headphone njengazo naziphi na ezinye esizifumanayo kwintengiso, kodwa ngaphezulu kubiza.
Sobona yintoni esinayo ngePixel Buds. Siqala kuyilo phakathi phakathi kwezemidlalo kunye nokusebenza, okt Google ngokulula wayefuna ukumbamba kwelona nani likhulu yoluntu kunokwenzeka. Nangona kunjalo, hayi siyilwe umahluko kwaphela. Kwakhona yantnoni Intambo ebajoyina ngoluhlobo indlela inkqubo yokubamba intraocular ivelisa ngayo amathandabuzo ubuncinci kwabo bethu bachitha usuku ukuvavanya iimveliso ezifanayo, ngokunyanisekileyo, Ndibabona bekude neJaybird X3 okanye iJaybird Freedom (phakathi kwabanye). Ke i uyilo alunamtsalane hayi ncma iluncedo. Nangona kunjalo thetha ungavavanywanga unesibindi, ke que ku funeka linda ukuba sazi ukuba uGoogle ine NJENGOKO uphakamise umkhono wakho nangoku asibonanga.
Ndingathini ukuba Ngaphandle koko i-earbuds ayikwazi ukubila, kodwa uGoogle akukho kukhankanywa ezinye kwiimpawu zekhompyutha oko kunokusenza sikholelwe, akukho manyano neengcali zesandi, kufuneka sizinike wenza inkampani ngaphandle kwamava kolu hlobo lwemveliso ungaqalisa iseti yentloko zonke ukusuka kwi- € 160. En enye ulungelelwano wezinto umsebenzi inkwenkwezi yinguqulelo ixesha langempela lomsindo, okanye ngaphezulu kakuhle umyalelo welizwi osebenza kuToliko lukaGoogle kwaye yintoni enye Kufanelekile ukuba ungasebenzi ngokusisigxina ukuba awufuni khupha ibhetri yakho. Inyani yile yokuba namhlanje kufanele ukuba sithethe ngenye indlela kwii-AirPods, kodwa uGoogle akasinikanga sizathu sokwenza njalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ngaba kunjalo nakwiiPixel Buds Earphones, ukhuphiswano kwii-AirPods?
Andivumi kuba andicingi ukuba ezinye ii-headphone ezingenazingcingo zikunika ukufikelela kumncedisi onje ngomncedisi kaGoogle hayi kumguquli wexesha lokwenyani, ungasathethi ke ukuba ziyakuvumela ukuba unqumame, ukhawuleze-phambili okanye ubuyele umva ngaphandle kufuneka uthathe ifowuni ukuze uyenze.
Onke amaSebe sitsho
Isiphetho esifanelekileyo endinokusifumana kuvavanyo lweli nqaku kukuba umbhali uvukile kumsindo ombi okanye uyayithiya imveliso angakhange ayizame nokuzama. Ndiyathemba ukuba yeyokuqala, kuba eyesibini ibonakala ngathi ayisebenzi kwaye yonakalisa igama leli phepha.
Phendula onke amaSebe
Kucacile ukuba uyaluvuyela utyekelo lombhali wenqaku, kuyacaca ukuba iphepha libonisa utyekelo olucacileyo, nangona kunjalo, olu tyekelo alufanelanga ukuba lungqubane nobuchwephesha obufanele ukuba bukhona xa kupapashwa zonke iintlobo zamanqaku. Umbhali ujolise ekuboniseni ukuba ngokusisiseko ezi headphone aziboneleli nganto, kwelinye icala, ayizukubonakalisa ubunyani obuguqulela kwinyani, yile nto yokuba ii-AirPod zigqithisile (ndiyazi kuba ndinayo) unikwe ukuba Isandi asinakuthelekiswa nexabiso kuba abanaso isandi sokurhoxisa, umgangatho udlula ngokulula kwezinye izixhobo ze-blutooth kwaye inyani yokuba ibambisene ngokupheleleyo noSiri ayithetheleli i-3,600.00 yeedola (i-pesos yaseMexico) zifanelekile. Mnumzana umbhali, yiba nenjongo ngakumbi, ube nobungcali ngakumbi kwaye wenze izigwebo zexabiso kwaye ubaluleke kakhulu, ewe, mhlawumbi (nje ukuba ubazame ngenene) le mveliso kaGoogle ayisiyiyo amanzi okanye iMfuneko, kodwa ayizizo nee-AirPods.
Molo, ayithelekisi, ukuba bekuya kuba kuhle ukubandakanya yonke into oyithethileyo.
Umdibaniso weApple Music kunye neFacebook Messenger sele uqalile